ह्याण्डराइटिङ राम्रा भए मन पनि राम्रो ! | Aaja ko Shiksha
ह्याण्डराइटिङ राम्रा भए मन पनि राम्रो !
मध्यबानेश्वरस्थित रत्नराज्य माध्यमिक विद्यालयकी सुजिता लम्साललाई ह्याण्डराइटिङ अर्थात् ‘हस्त लेखन’मा निकै रमाइलो लाग्छ । उहाँ कक्षा ९ मा पढ्नुहुन्छ । उहाँलाई आफ्नो जस्तो अक्षर अरुले पनि लेखुन् भन्ने लाग्छ । कक्षागत होस् वा प्रतिस्पर्धात्मक, ह्याण्डराइटिङ गर्न सुजिता तयार भइहाल्नुहुन्छ । ‘ह्याण्डराइटिङले लेखनमा सुधार त हुन्छ नै, शिक्षकको प्रिय पनि हुन पाइँदो रहेछ,’ सुजिताको अनुभव छ । अक्षरलाई राम्रो कसरी बनाउन सकिन्छ भनेर सधैं उहाँ तल्लिन देखिनुहुन्छ । सुजिताका अक्षर चट्ट सिधा परेका छन् । उहाँलाई आफ्नो अक्षरले आफंैलाई आकर्षण गर्छ ।
बालविनायक आधारभूत विद्यालयमा कक्षा ५ मा अध्ययनरत राजन श्रेष्ठ जाडो विदा पाएर घरमै रहनुभएको छ । घरमा फुर्सद भएर बसेका बेला पनि उहाँ नेपाली विषयको पाठ लेख्दै हुनुहुुन्थ्यो । उहाँलाई ह्याण्डराइटिङ कसरी राम्रो पार्ने होला भन्ने परिरहन्छ । नेपाली विषय सजिलो लाग्ने र कपीको माथिल्लो पट्टिको लाइनमा झुण्ड्याएर लेख्ने बानी रहेछ । आफ्नो अक्षर राम्रो बनाउन परिवारको सदस्यबाट प्रेरित भएको उहाँले सुनाउनुभयो । राजनमा थरिथरिका अक्षर लेख्ने सौख पनि रहेछ । उहाँ अक्षर डबल बनाएर लेख्दा आकर्षक र राम्रो लाग्ने बताउनुहुन्छ । विद्यालयमा भएको ह्याण्डराइटिङ प्रतियोगितामा राजन दोस्रो बन्नुभएको थियो । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘राम्रो गरेर अझै ठूलो पुरस्कार पाउने धोको छ ।’
हस्तलेखन हरेक व्यक्तिका फरक–फरक हुन्छन् नै । भनिन्छ, मानिसको मन अनुसार अक्षरको रुप देखिन्छ । ठट्टामा भन्ने गरिन्छ–सिधा अक्षर हुनेको मन सिधा र बाङ्गो लेख्नेको स्वभाव बाङ्गै हुन्छ रे ! जे भनेपनि हस्तलेखनका केही साझा मानक छन् । नेपालीमा अक्षर लेखेर मात्र पुग्दैन । डिको अर्थात् छाना दिनु पर्छ । अंग्रेजीमा दिनै पर्दैन । अंक लेख्दाचाहिँ तरिका उस्तै हुन्छन् । अक्षरको बान्कीचाहिँ केही साझा पनि छन् । जस्तै, दायाँ छड्के, बायाँ छड्के, सिधा, खिरिलो र मोटो अनि ठूला–साना किसिमका अक्षर देख्न पाइन्छ । सामुदायिक वा निजी विद्यालयमा पढ्ने औषत विद्यार्थीको ह्याण्डराइटिङ कस्ता होलान् ? सबैमा चासोको विषय बन्ने गर्छ । कसैका अक्षर अब्बल हुन्छन् । कसैका मध्यम त कसैका ठिकै लाग्ने हुन्छन् । कोही अंग्रेजी अक्षर लेख्न मन पराउँछन् भने कोही नेपाली लेख्न ।
रेखा तोलाङ्गे ललितपुरको लुभूस्थित भ्याली पब्लिक बोर्डिङ स्कूलमा कक्षा ५ पढ्दै हुनुहुन्छ । उहाँलाई अंग्रेजी अक्षर लेख्न निकै मज्जा आउँछ । किनकि, उहाँलाई नेपालीमा शुद्ध लेख्न र वाक्य उच्चारणमा समस्या हुने रहेछ । ‘समय पनि नेपाली अक्षरको तुलनामा अंग्रेजी लेख्न कम लाग्छ,’ रेखा भन्नुहुन्छ । अक्षरलाई सानो र ठूलो दुबै किसिमको लेख्न उहाँको हात निकै पारखिलो छ । तोलाङ्गे भन्नुहुन्छ, ‘मेरो अक्षर छड्के जाने गर्छ, योचाहिँ त्यत्ति राम्रो देखिन्न ।’ सोही स्कूलका विराज तोलाङे कक्षा ६ मा पढ्नुहुन्छ । उहाँ विद्यालयले ह्याण्डराइटिङ नदिने बताउनुहुन्छ । उहाँ घरमै समय मिलाएर अक्षर राम्रो बनाउन अंग्रेजी ह्यान्डराईटिङ गर्ने गर्नुहुन्छ । उहाँलाई पनि अंग्रेजी अक्षर लेख्न सजिलो हुन्छ रे । विराजलाई नेपालीमा भएका लामो वाक्य देख्दैमा दिक्क लाग्छ । शिक्षकप्रति पनि विराजको उत्तिकै गुनासो छ । ‘विद्यालयमा एकपटक प्रतिस्पर्धा भएको थियो तर कक्षा–शिक्षकले ह्याण्डराइटिङ नै दिने गर्नुहुन्न,’ विराज भन्नुहुन्छ, ‘त्यसैले घरमा समय निकालेर ह्याण्डराइटिङ गर्ने गर्छु ।’
आजकाल हस्तलेखन क्रमशः छायाँ पर्दै गइरहेको महशूस गरिँदैछ । कम्प्यूटर र सूचना प्रविधिको बिस्तारसँगै पढेलेखेका व्यक्ति बढी टाइपिङ्गमा अभ्यस्त हुन थालेका छन् । कोही कम्प्यूटरमा त कोही मोवाइलकै स्क्रिनमा आफ्ना औंलाहरु सल्बलाइदिन्छन् । यसले गर्दा स्कूले जीवनमा निकै अब्बल अक्षर लेख्नेहरु पनि अहिले अल्छि मानिरहेका भेटिन्छन् । यस्तो प्रवृत्तिप्रति विद्यालयका शिक्षकहरु भने अलि बढी चिन्तित देखिएका छन् । काठमाडौं बानेश्वरस्थित रत्नराज्य माविकी प्रधानाध्यापक गीता खरेल विद्यार्थीका लागि लेखाई सुधार्न कस्ता उपाय लगाउँदा राम्रो होला भनेर अनेक योजना सोचिरहनुहुन्छ । उहाँको विद्यालयमा ह्याण्डराइटिङ प्रतियोगिता नै गर्ने गरिन्छ । जहाँ कक्षा १ देखि ९ सम्मका इच्छुक विद्यार्थीका लागि ह्याण्डराइटिङ प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुने व्यवस्था छ । यसका लागि यो विद्यालयमा अतिरिक्त क्रियाकलापको व्यवस्थापक नै छुट्टै राखिएका छन् । यस विद्यालयका अतिरिक्त क्रियाकलाप व्यवस्थापक सुदर्शन थापा विद्यार्थीका लागि अग्रसर गराउन के गर्नुपर्छ भनेर पहिले योजना बनाई अन्तक्र्रिया गर्नुहुन्छ । अतिरिक्त क्रियाकलापलाई ‘ऐकेडेमी सेक्टर’ नाम दिइएको छ । विद्यार्थीको लेखनलाई अझ गुणस्तर बनाउन लेखनसम्बन्धी राम्रो तालिम दिने शिक्षकको खोजीमा रहेको थापाले बताउनुभयो ।
प्रअ खरेलले विद्यार्थीको हातको गतिलाई तीब्र गराउन र उनीहरुमा सोच्ने शक्ति बढाउन ह्याण्डराइटिङ गराउने गरिएको बताउनुभयो । ‘राम्रो गर्ने विद्यार्थीलाई पुरस्कार दिएर हौसला बढाउने गरेका छौं,’ उहाँले भन्नुभयो । यसै विद्यालयकी शिक्षक लता पौडेलले विद्यालयमा लामो विदा भएका दिन विद्यार्थीलाई ह्याण्डराइटिङ दिने गरेको सुनाउनुभयो । उहाँले ‘विद्यार्थीको लेखाइ शैलीलाई सुधार्न मद्दत पुग्ने भएकाले ह्याण्डराइटिङ विषयगतमा रहेर दिने गरेका छौं’ भन्नुभयो ।